DVD cirib Tutorial: Sida loo Guba DVD ah ee Free la DVD cirib
1 DVD cirib Tutorial
1.1 DVD cirib Tutorial
2 DVD cirib Menu
2.1 Custom DVD cirib Menu
3 DVD cirib Dhibaatooyinka
3.1 DVD cirib Trouleshooting
4 DVD cirib lagu bedelan karo
4.1 DVD Filck lagu bedelan karo
Sida loo Guba DVD ah ee Free la DVD cirib
Tani tutorial cirib DVD ku tusi doonaa sida loo qoraa iyo disc DVD DVD la cirib, taas oo software ah DVD qoraalka u fududahay gebi ahaanba bilaash ah gubi.
Ha Laysu Diyaariyo
Download iyo rakibi DVD cirib si aad u computer. Folder rakibo default waa C: Barnaamijka FilesDVD cirib. Waxa lagugula talinayaa inaad tijaabi inta qoraalka DVD aad. Sidaas video tijaabo isagoo muddo gaaban oo size file ayaa loo baahan yahay. Haddaba bal fiiriya socda tutorial DVD cirib ay gubaan aad DVD ugu horeysay la freeware DVD cirib.
Tallaabo 1: Ku dar horyaal in Mashruuca
Talaabada 2: Edit ku horyaal ee Mashruuca (optional)
Tallaabo 3: Ku dar menu ah (optional)
Talaabada 4: Samee DVD Faylal ay la DVD cirib
Talaabada 5: Gubashada files si DVD isticmaalaya ImgBurn
Interface ayaa user ee DVD cirib waa mid fudud. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira farqi yar oo u dhaxeeya DVD cirib iyo software guud. Idinkuna ma waxaad bilaabi ka bar qalab dusheeda, halkii, guji horyaalka dar ... on xaq. DVD cirib taageeraa oo dhan qaabab video oo caan ah. Sidaa darteed, diinta ma waxaa guud ahaan loo baahan yahay. Macluumaad Project ayaa la soo bandhigi doonaa koonaha midig, oo ay ku jiraan tiro horyaalka, muddo mashruuca, meel disk adag loo isticmaalo, iwm
Waa optional in xaalkaa horyaalka ku daray. Fursadaha goob waxaa ka mid ah muuqa, thumbnail, cutubyada, Cinwaan, audio, iyo wixii la mid ah.
Ku dar Tracks Audio
Waxaad si fudud ku dari kartaa track faallo labaad ama music qaar ka mid ah ay sii socotay inay u "Audio Track" tab. Haddii aad dooratay file video ama file aad dooratay uu leeyahay in ka badan hal track audio, waxaa lagu weydiin doonaa in aad doorato oo track in aad ku darto.
Ku dar subtitles
Si aad ku dari subtitles horyaalka ah, waxaad samayn lahaydeen oo dhan waa xaalkaa horyaalka, tag "subtitles" tab, iyo u isticmaal badhanka dar in aad ku darto files Cinwaan horyaalka. Waxaad iyaga reorder karaa iyadoo la isticmaalayo badhamada fallaadha. Waa aan shaqada ugu cadcad ee DVD cirib. Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale waxaa jira khasaaro of DVD cirib - ma waxaad ku eegaan karo video ah. My xal waayo, kanu waa in ay isticmaalaan VLC in ay ku eegaan file .vob galka VIDEO_TS ah. Wixii Falanqeynta Cinwaan, u tag Video / Cinwaan Track in ay doortaan track la doonayo.
DVD cirib sidoo kale aad u saamaxaaya in ay ku darto menu ah in DVD aad, inkasta oo ay jiraan tahay heli karaa 6 oo kaliya. Si aad ku dari menu ah, tag button goobaha Menu iyo dooran template ah oo aad jeceshahay. Ka dib markii aad dooratay template ah, hubi inaad awood u sahlo checkbox menu si menu lagu soo dari doonaa on your disc.
Talo:? Ma doonaysaa in aad astaysto template cirib DVD Halkan waxay leedahay Hanuuniye in ay kaa caawiyaan in >>
Ka hor inta diinta dari videos in DVD files socon, dooran folder meel ku kaydiso files ugu hooseysa aad. By default, galkan lagu gebi ahaanba la tirtiro doonaa mar kasta oo aad la abuuro DVD cusub ka DVD cirib. Ogow in ay isticmaali karaan 4.7GB ama meel dheeraad ah, si aad si fiican u dooran lahaa drive ah in badan oo meel bilaash ah.
Hadda riix Abuur DVD badhanka si ay u bilaabaan diinta. Dib u fadhiiso oo sug diinta ka dhameystiran. Tani waxay qaadan kartaa ilaa qadar wanaagsan oo waqti ku xiran tahay sida ay u soomi your computer yahay iyo baaxadda DVD video ah.
Next, riix batoonka Close. Waxba dhacay? Waa wax iska caadi, sababta oo ah DVD cirib dhalin oo keliya files DVD ah. Si aad u gubi files si DVD, DVD cirib isticmaalaa DVD software free kale ImgBurn, oo isku mar lagu rakibi doonaa DVD cirib. Ogow in aanay tani ahayn DVD XOGTA ah, waa DVD video ah in aad ka ciyaari karaa ciyaaryahan DVD caadiga ah. Raac tilmaamaadkan si ay u gubaan DVD la ImgBurn.
1. Open ImgBurn galka rakibo, sida caadiga ah C / Project Files / DVD cirib / imgburn / imgburn.exe
2. Riix qor faylasha / fayl in doorasho cajalid.
3. Hadda riix "Browse u gal ah" icon baar midig kooxda qalab.
4. In wada hadal pop-up ah, hel folder ku wadid aad u adag meesha faylasha ayaa laga cirib DVD. Asal ahaan ka dooro gal ah oo la yidhaahdo "DVD", taas oo ah waalidka si toos ah labadaba AUDIO_TS iyo fayl VIDEO_TS.
5. Gali DVD faaruq ka dibna riix on Dhis Waxaa badhanka hoose. Waa mid ka mid ah la folder iyo icon cagaaran tilmaamaya in DVD ah.
Ma doonaysaa in aad hesho qalab DVD gubashadii awood badan? Halkan Wondershare DVD Creator si weyn lagu talinayaa. Waxay bixisaa qoraalka oo dhan-in-ka mid ah DVD ah oo xal gubanaya u isticmaala qaba dalabaadka sare oo tayo leh DVD iyo wax soo saarka. Waxa ay taageertaa sawir iyo video qaabab loo jecel yahay oo dhan, DVD bedeley ma guurto ah iyo dhaceen , iyo sidoo kale abuuridda slideshow. Waxaad laga yaabaa koobi DVD badan halkii mar haddii aad u baahan tahay si ay u gubaan DVDs hadiyad. Isku day lacag la'aan ah hadda.
Free arrimo DVD Menu ee DVD cirib
Sida loo Habee kuu gaar ah DVD cirib Menu
Download DVD cirib u Mac Alternative
Windows 10 DVD sameeyey, Si fudud Samee Muqaal, Guba DVD ee Windows 10
Download DVD gubi ugu dhaqsiyaha badan u Win / Mac
DVDStyler Review, Waxa Ayidaya iyo Diidaya
Windows DVD kii iyaga uumay uma gubi doonaa MOV? Xalka
Freemake Alternative: Download Freemake for Windows iyo Mac Alternative
Hel Software ee Best Like Nero
Top Shabakadaha in buugga Your DVD Qashin Online
Sida loo Guba Hulu Movies in DVD
Sida loo Beddelaan iyo Guba MKV in DVD ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
> Resource > DVD > Sida loo Guba DVD ah ee Free la DVD cirib